Whiten သွားသိကောင်းစရာများ | သွားလမ်းညွှန် Whiten ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းစဉ်
သငျသညျလုံခြုံစွာသင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့လုပျနိုငျဘို့အဲဒီမှာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်? အားလုံးကတော့ကိုအကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရနိုင်၏. ဤဆောင်းပါးတွင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဘေးကင်းလုံခြုံအံသွားအဘို့သက်သေပြနည်းလမ်းများဆွေးနွေးထားပါတယ်.
သင်သည်ကိုယ်ကိုနှစ်နာရီ strips တွေကနေသွားဖုံး sensitivity ကိုခံစားနေရပြီးတှေ့လြှငျ, သငျသညျအပြီး strips တွေဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားသင့် 30 အစားမိနစ်. ဒါကြောင့်အဘို့အ strips တွေနှစ်ဦးကြိမ်တစ်နေ့လျှင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောနေ 30 နှစ်ပတ်အတွင်းတစ်ဦးကျြောကာလအတှငျးမိနစ်, သူတို့သွားဖုံး sensitivity ကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အဖြစ်ဖွယ်ရှိမဟုတ်.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့သွားဆရာဝန်တစ်ဦးလေဆာနှင့်အတူ whitening အံသွားလုပျနိုငျ. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အံသွား၎င်းတို့၏ကနဦးအဖြူအရောင်ပြန်ပြန်ပြောင်းရှိခြင်းဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းငှါ.
ဤသည်ကိုသင့်သွားဆရာဝန်သွားရောက်သင်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်သင့်ရလဒ်များကိုအဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယများမှာ. ဆရာ laypeople စတိုးဆိုင်မှာအသုံးပွုဖို့အတှကျလွန်းအန္တရာယ်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုသင့်အံသွား Whiten ဖို့နည်းစနစ်ကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်.
အဖြူအံသွားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, သငျသညျပုံမှန်အစည်းအဝေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စင်ကြယ်သောအမှုကိုပြုသင့်. တိုင်းခြောက်လသွားဆရာဝန်တစ်ဦးခရီးစဉ်အချိန်စာရင်း, သငျသညျအသီးအသီးသနျ့ရှငျးရေးအတှကျရှိပါတယ်စဉ်ထွက်ရှိသောသင်၏နောက်ရက်ချိန်းအောင်. အများဆုံးအာမခံဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဖုံးလွှမ်းကတည်းကသင်ဤချိန်းဆိုချက်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားသင့်.
အကြံပြုချက်! အစာစားခြင်းသို့မဟုတ်မသောက်ရသောအခါသင်သည်သင်၏အံသွား Whiten ပြီးနောက်သတိထား Be. Whitened အံသွားအစွန်းအထင်းမှပိုပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်များမှာ.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သွားဆရာကမ်းလှမ်းမှု whitening မှကြွလာသောအခါအံသွား whitening လေဆာကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒီဖြစ်နိုင်သူတို့မူလကတဦးတည်းအမြန်ခရီးစဉ်၌ရှိအရိပ်သည်. တစ်ဦးကအရောင်ချွတ်အေးဂျင့်သွားဖို့လျှောက်ထားသည်, ပြီးတော့သူတို့ကိုသက်ဝင်တဲ့လေဆာရောင်ခြည်နှင့်အတူပစ်ခတ်ကြသည်. အဆိုပါအံသွားငါးခြောက်အရိပ်အားဖြင့်ချက်ချင်းဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျထုတ်ကုန် whitening အချို့သောသွားနှင့်ကိုက်ခဲတဲ့ sensitivity ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းငှါ. ဒါကြောင့်ယာယီအခွအေနေစေခြင်းငှါသော်လည်း, ဒါကြောင့်ဆဲထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်. သင်ဤနာကျင်မှုခံစားရ အကယ်., ထုတ်ကုန်သုံးပြီးရပ်တန့်နှင့်အဖြစ်မကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်သွားဆရာဝန်မြင်. သင့်ရဲ့သွားဆရာဝန်တစ်ဦးနာကျင်မှု့မရှိတဲ့ထုံးစံ၌သင်တို့၏အံသွား Whiten ကိုကူညီကွဲပြားခြားနားတဲ့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်.
အကြံပြုချက်! လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နိန်သင့်ရဲ့သွားနှင့်ကိုက်ခဲမုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါထည့်ပေါင်းပါ. ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုဒါကိုထိရောက်စွာနှင့်သဘာဝသင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ထိုထုတ်ကုန်၏အားလုံးအတွက်ဓာတုပစ္စည်းသင့်ရဲ့အံသွားဖို့ bonding အားဖြင့်ပိုပြီးအမြဲတမ်းကိုရှုတ်ချ. အဆိုပါပွန်းစားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုလက်ညှိုးစုတ်တံဖယ်ရှားပေးသင့်ရဲ့အံသွားသန့်ရှင်းသောလည်းသေချာစေသည်ကဘာလဲ.
စတော်ဘယ်ရီစွန်းအံသွားအဘို့ကြီးစွာသောကသဘာဝကုသနေကြသည်. ဤနည်းလမ်းကိုလုပ်ကိုင်ဖို့သက်သေပြခဲ့. ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ, သင့်ရဲ့အံသွားပေါ်ဖြတ်စတော်ဘယ်ရီပွတ်နယ်သူတို့ကို Whiten နိုင်. ကုသမှုရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောရလာဒ်များရရန်သီးကိုသင့်အံသွားပေါ်ပတ်ပတ်လည်ငါးမိနစ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေကွပါစို့.
အကြံပြုချက်! သငျသညျမဆိုသွား-whitening ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်, မည်သည့်ယားယံဖွံ့ဖြိုးလျှင်ချက်ချင်းရပ်တန့်. အဆိုပါ sensitivity ကိုသင့်အံသွားထိခိုက်သောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်.
သငျသညျတည်းကကုသမှုမရှိဘူးအခေါင်းပေါက်များသို့မဟုတ်သွားဖုံးရောဂါခံစားနေရပြီးလျှင်သင်တကယ်ကိုသင့်ရဲ့အံသွား whitening မှမတိုင်မီသွားဆရာဝန်ကိုသွားသင့်တယ်. သင့်ရဲ့အံသွား whitening အခါသင်အပိုဂရုစိုက်ရမယ်. သင့်ရဲ့သွားဆရာသင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့များအတွက်အထိရောက်ဆုံးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသောဗျူဟာကိုရှာဖွေသင်ပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည်.
သငျသညျအမြန်ရလဒ်အတွက်ရှာကြသည်ဒါမှမဟုတ်သင်ကအရမ်းဆိုးအစွန်းအထင်းရှိပါကသင်တဲ့ professional Whiten သင့်ရဲ့အံသွားရှိသည်ဖို့လိုပေမည်. ဤနည်းလမ်းကိုအနည်းငယ်ပိုကုန်ကျ, ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့အံသွား Whiten နိုင်ပြီးအခြား whitening နည်းလမ်းများထက်ပိုမြန်စေနိုင်ပါတယ်.
အကြံပြုချက်! သင်တစ်ဦးဆေးလိပ်သောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ပြီးနောက်သင်လုပ်သင့်ကိုပထမဦးဆုံးအရာဆေးလိပ်ကိုရပ်တန့်ဖြစ်ပါတယ်. သင်ဆေးလိပ်သောက်နေလျှင်, သင့်ရဲ့အံသွား Whiten, ထို့နောက်ဖွင့််လင်းမှဆက်လက်, သငျသညျကိုပယ်သင့်ငွေ flushing နေကြတယ်.
အံသွား Whiten ကြောင်း strips တန်ဖိုးနည်းဖြစ်ကြပြီးအလွန်အမင်းတတ်နိုင်များမှာ. ဤရွေ့ကား strips တွေသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်ချထားပါသည်. whitening strips တွေလူကြိုက်များအတွက်အကျဉ်းတစ်ဟုန်ထိုးခံစား, ကြောင့်စုံလင်သောရလဒ်များကိုထက်လျော့နည်းဖို့.
သငျသညျ staining စေနိုငျသောအဖျော်ယမကာမသောက်ရန်ရှိပါက, ရေနှင့်သူတို့ကိုနောက်ဆက်တွဲ. ဒီစွန်းထင်းတဲ့အထဲကသင့်ရဲ့အံသွားတားဆီးနိုငျ. နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကောက်ရိုးတဆင့်ဤသူကိုမသောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်သင့်ကော်ဖီနှင့်အတူ Non-အကြမ်းဖျဉ်းဖတ်နို့ကိုသုံး.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့အံသွား whitening ပြီးနောက်, ပြုံးစောင့်ရှောက်ဖို့သင်သတိရဖို့ Vaseline လျှောက်ထား. ထိုသို့ tastiest opt​​ion ကိုမဖွစျစခွေငျးငှါနေစဉ်, အ petrolatum ဂျယ်လီကာအကာအကွယ်ဖွဲ့စည်းရန်လိမ့်မည်, အစွန်းအထင်းကိုတားဆီးလိမ့်မည်ဟုယာယီအပေါ်ယံပိုင်း.
အကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း mouthwash ပယ်ရှောင်ကြဉ်ပါ, ဆက်ပြောသည်အရောင်လည်းရှိ၏, အထူးသဖြင့်လျှင်. Mouthwash တကယ်တော့သင့်ရဲ့အံသွားကိုပိုမိုအရောင်ပြောင်းဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်. လည်း, သူတို့ကိုအများကြီးကိုသင့်လျှာကိုနှင့်သွားဖုံးအထိခိုက်မခံစေနိုင်သည်ထားတဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်အရက်များ, အဖြစ်သင့်ရဲ့သွေးကြောသို့ရတဲ့.
အကြံပြုချက်! သင်သည်သင်၏အသက်ရှုအကြောင်းပိုမိုယုံကြည်မှုလျှင်သင်သည်သင်၏အပြုံးအကြောင်းကိုပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်လိမ့်မယ်. သငျသညျမကောငျးတဲ့အသက်ရှုရှိပါကဆုံးဖြတ်ရန်သင့်သန့်ရှင်းသောလက်၏နောက်ကျောကိုလျက်.
အော်ဂဲနစ်အုန်းသီးရေနံသင့်ရဲ့အံသွားဘို့အ Whiten အေးဂျင့်သည်. ကိုယ့်အဘို့ 10 မိနစ်တစ်ရက်, အနညျးဆုံးအဘို့အအုန်းသီးဆီနှင့်လက်မဆေးကြိုးစားကြည့်ပါ 10 မိနစ်နေ့တိုင်း. ပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 မိနစ္မ်ား, သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်အလိုတခုတည်းအဖြစ်သင်၏နှုတ်ထဲကအသုတ်ခြင်းနှင့်ဖြီး. သငျသညျဖွယ်ရှိ့ရက်အနည်းငယ်ပြီးနောက်ရလဒ်များကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်.
အဘယျအသင့်ရဲ့အံသွားနည်းလမ်း whitening သငျသညျအဘို့ပြုသွားသည်ကိုသိပါ. သင်အသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်. လက်တွေ့စံနမူနာရှိပါက, သင်သည်သင်၏အံသွားအဖြူနှင့်အတူစိတ်ပျက်တက်လေစေခြင်းငှါ. ပါဝင်ပတ်သက်အချက်များစဉ်းစားကြည့်ပါ, သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်တူ, နှင့်သင့်အံသွားပေါ်အစွန်းအထင်းများနှင့်အရောင်ပြောင်း၏အတိုင်းအတာ. မြျှောလငျ့ဘယျအရာကသင်၏သွားဆရာဝန်ကိုမေး.
အကြံပြုချက်! လတ်ဆတ်သော parsley သို့မဟုတ် cilantro ဝါးသင်သည်သင်၏အပြုံးတောက်ပစေတယ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. အဆိုပါသဘာဟင်းသီးဟင်းရွက်အစွန်းအထင်းဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယား neutralizing အတွက်ကူညီနိုင်မဂုဏ်သတ္တိများပါဝင်.
မှောင်မိုက်အစာအမှုန်အချိန်ကျော်အစွန်းအထင်းမှသင်၏နှုတ်စေနိုင်ပါတယ်. အစာစားပြီးပြီးတစ်သကြားအခမဲ့သွားဖုံးဝါးအားဖြင့်ဤသူအစွန်းအထင်းတွေကိုရှောင်ပါ. ဒါဟာမဆိုအစာအမှုန်ဖယ်ရှားရန်နှင့်သင့်အံသွား staining မှသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပုံမှန် FLOSS Include. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အံသွားအရောင်ပြောင်းနိုင်ကြောင်းကိုသင်၏ plaque ၏ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
စတော်ဘယ်ရီသဘာဝကျကျသင့်ရဲ့အံသွားတောက်ပစေတယ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြူပေါ်လာ. စတော်ဘယ်ရီသင့်ရဲ့ whitening အံသွားဆေးတစ်လက်အပေါ်တစ်ဦးအလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ရလဒ်များကိုသရုပ်ပြခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်. ထိုစတော်ဘယ်ရီသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်အကောင်းဆုံးရလဒ်အတွက်အနည်းဆုံးငါးမိနစ်ဆက်လက် Allow.
သင်သည်သင်၏အံသွားလည်းဖြူဖြစ်လိုလျှင်, လိမ္မော်သီးသို့မဟုတ်အခြား Citrus အသီးကိုစားသုံးကြပါဘူး. ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့ဖျော်ရည်သောက်သုံးမကြိုးစား. ဤအအစားအစာထဲမှာအက်ဆစ်သင့်ရဲ့အံသွားမှာကိုပယ်စားကြလိမ့်မည်. လည်း, ဒါကြောင့်အိပ်ရာမဝင်မီကိုလောင်လျှင်အသီးများနှင့်အသီးဖျော်ရည်၏ဒီ type အက်ဆစ် reflux အဘို့အခွင့်အလမ်းကိုတိုးပွားစေသည်ဟုသက်သေပြခဲ့, အရာအလှည့်အတွက်လည်းသင့်ရဲ့အပြုံးသာသက်ရောက်သည်. ထိုကွောငျ့, အထူးသဖြင့်ညဥ့်အခါကဤအစားအစာနှင့်ဖျော်ရည်ကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစား.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့အစားအစာအတွက်ပိုပြီးနို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်. အားကြီးသော, ကျန်းမာသောအံသွားဒိန်ချဉ်နဲ့တူအစားအစာများအတွက်အာဟာရမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်, နို့နှင့်ဒိန်ခဲ.
သငျသညျပါအောက်ဆိုဒ်နှင့်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်အတူအိမ်တွင်တစ်ဦး whitening ဖွဲ့အစီအမံများရှိနိုင်ပါသည်. အထိဆယ်မိနစ်အဘို့သင့်အံသွားတိုက်ဖို့ဒီအရောအနှောကိုသုံးပါကုနျလှနျခဲ့ပြီ. သငျသညျတိုက်ပုံကိုခက်ခဲသတိထားပါ, ဒါကြောင့်သွားဖုံးယားယံစေနိုင်ကြောင်းအဖြစ်.
ဖြူအံသွားများအတွက်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းသံပုရာဖျော်ရည်ကိုအတူစားပွဲဆားရောမွှေဖို့ဖြစ်ပါတယ်. မည်သည့်အလုံပိတ်ကွန်တိန်နာထဲမှာအရောအနှောကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, သင်မကြာခဏအသုံးပွုနိုငျနှင့်ကမရှိသလောက်လုယူပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်.
အကြံပြုချက်! တစ်ဦးကောက်ရိုးတဆင့်သောက်သုံးအံသွားအစွန်းအထင်းတားဆီးကူညီပေးနိုင်ပါသည်. တစ်ဦးကောက်ရိုးတဆင့်သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏သွားတို့သည်အရည်နှင့်ထိတွေ့သောအချိန် minimize.
သငျသညျအစာစားပြီးနောက်ဘက်တီးရီးယားသင်၏နှုတ်ပတ်ပတ်လည်ကြီးထွားလာမည်. သင့်ရဲ့အံသွားသန့်စင်ကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ဘက်တီးရီးယားပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုတိုက်ဖို့သတိရပါ.
အခြောက်လှန်းပင်လယ်အော်အရွက်များနှင့်အခြောက်လှန်းလိမ္မော်ရောင် peels ယူ. တစ်ဦးအမှုန့်သို့သူတို့ကိုကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်. ထိုအမှုန့်ဖို့အသာပုတ်ရေနဲ့ splash Add, ထိုသို့ချက်ချင်းသွားတိုက်ဆေး whitening သဘာဝအံသွားစေမည်. ဤသည်ကိုလည်းသင်၏အသွားနှင့်ကိုက်ခဲနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားကိစ္စများကာကွယ်တားဆီးကိုတွေ့ထားပြီ.
အကြံပြုချက်! အသီးတို့သည်ကြီးစွာသောအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, သဘာဝက, အံသွား Whiten မှဘေးကင်းလုံခြုံလမ်း. စတော်ဘယ်ရီဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်.
ဗန်းကောင်းစွာသင့်ရဲ့အံသွား fit မထားဘူးဆိုရင်, အ Whiten လိမ်းဆေးမှဓာတုပစ္စည်းသွားဖုံးယားယံထဲမှာရရှိလာတဲ့အထဲကစိမ့်နိုင်.
တချို့ကသဘာဝကကုစား Whiten အံသွားကူညီပေးပါမည်, ထိုကဲ့သို့သောပန်းသီး cider ရှလကာရည်အဖြစ်. သင်၏နှုတ်၌ဘက်တီးရီးယားဖယ်ရှားနေစဉ်ဒါဟာသင့်ရဲ့အံသွားကိုစင်ကြယ်စေခြင်းနှင့်အစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားဖို့လူသိများသည်. သင်သည်သင်၏အံသွားတိုက်မီကတစျနေ့တစျကွိမျနဲ့ပတျသကျတဲ့ရှာလကာရည် gargling ကြိုးစားပါ.
သင့်ရဲ့အပြုံးတောက်ပကြည့်ရှုမည်. အပြာ-based ကြည့်တဲ့နှုတ်ခမ်းနီနှင့်အတူနှုတ်ခမ်းအရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးကြိုးစားပါသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းတောက်ပြောင်ကိုသုံး. အပြာ-ţineလီဗာပူးသို့မဟုတ်သီးဖြစ်ကြောင်းအရောင်များကိုသင့်ရဲ့အံသွားလည်းဖြူပေါ်လာကူညီ. သူတို့သည်သင်၏အံသွားစေနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ကွာဆိုရင်တော့ Matte နှုတ်ခမ်းထုတ်ကုန်နေ.
အံသွားကိုရှုတ်ချကြောင်းအဖျော်ယမကာစားသုံးပြီးနောက်သောက်ရေကိုသင့်အံသွားစောင့်ရှောက်နိုင်. တစ်ဦးကရေလြျှော setting.You မှသောက်ဖြစ်စေတဲ့အအစွန်းအထင်းကိုလည်းကောက်ရိုးတဆင့်မသောက်နိုင်ကိုကာကွယ်တားဆီး.
သငျသညျတိုက်ကိုသိမှတ် Make, ကြားရှင်းကြိုး, အနည်းဆုံးတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်တစ်ဦးသွားဖုံးနှိပ်နယ်ကိုသုံး. သင့်ရဲ့အံသွားစေရန်ဆုံးအကောင်းဆုံးလမ်းသင်သည်တစုံတခုကိုစားသို့မဟုတ်မသောက်အခါတိုင်းတိုက်နှင့် FLOSS ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏အံသွား staining တက်အဆုံးသတ်နိုင်အစားအစာအပျက်အစီးများနှင့် plaque ၏ဖယ်ရှားပစ်ရနြိုဤနည်း.
စတော်ဘယ်ရီ ငါးပိကိုသင် Whiten အံသွားကိုကူညီနိုငျ. တစ်ဦးငါးပိသို့လတ်ဆတ်တဲ့စတော်ဘယ်ရီ mash, ပြီးတော့သင့်ရဲ့အံသွားဖို့အရောအနှောကိုလျှောက်ထား. အဆိုပါစတော်ဘယ်ရီအတိတ်သင့်ရဲ့အံသွားကြမ်းတမ်းဓာတုပစ္စည်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲလည်းဖြူဖြစ်စေမည်. နည်းလမ်း whitening ဒီအိမ်မှာသင် Over-Whiten ကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးသည်သဘာဝအဖြူအပြုံးပေးနိုင်ပါသည်.
Mouthwash သင့်ရဲ့အံသွားအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်အကြောင်း,. သငျသညျ mouthwash အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆီးတားနိုငျသောအံသွားပြီဖြစ်စေမသင့်ရဲ့သွားဆရာဝန်ကိုမေး.
ယခုအားဖြင့်သင်တို့ထင်မြင်ချက်တွေအများကြီး whitening အံသွား၏ဘာသာရပ်အပေါ်ရှိပါတယ်သိ. သင်သည်သင်၏အံသွားမထိခိုက်စေဘဲ Pearly အဖြူအပြုံးရဖို့ဘယ်လိုယခုအချို့အတွေးအခေါ်များရှိသင့်. ဒီဆောင်းပါးမှာအကြံဉာဏ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာသင့်ရဲ့အပြုံးတောက်ပအောင်လည်.
Whiten သွားလမ်းညွှန် Posted by ကို - ဇွန်လ 5, 2016 12 မှာ:51 နံနက်
categories: Whiten သွားသိကောင်းစရာများ Tags:: တောက်ပတဲ့အဖြူရောင်အပြုံး, တစ်ဦးကတောက်ပအဖြူရောင်အပြုံး Get, အံသွား Whiten ဖို့ဘယ်လို, ငါ့သှား Whiten, Whiten အံသွား, သင့်ရဲ့အံသွား Whiten, အဝါရောင်သှားပွီး။ ပွုံး
သင့်ရဲ့အံသွားရယူခြင်းငွေနှင့်အချိန်ကုန်အများကြီးယူနိုင်ပါသည်. သငျသညျမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်သောသက်သေအံသွား-whitening အကြံပေးချက်များချင်တယ်ဆိုရင်ရှိပါတယ်အလုံးစုံကိုသဘာဝကုစားမှ technology.This ဆောင်းပါးအတွက်အလွန်နောက်ဆုံးအထိနိုငျသောအံသွား Whiten မှဝယ်ယူဘို့နည်းလမ်းများနှင့်နည်းပညာတွေအများကြီးယနေ့တဖတ်မှပြပါလိမ့်မယ်.
အမြန်ဆုံးရလဒ်အတွက်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Whiten န်ဆောင်မှုကိုရှာခြင်း. သူတို့ကအနည်းငယ်တိုတောင်းခရီးစဉ်ယူနိုင်ပါသည်, နှင့်သိသိသာသာရလဒ်များကိုရှည်လျားတည်မြဲဖြစ်ကြာရှည်ဦးမည်. သင့်ရဲ့ဆရာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိကြောင်းရောနှော whitening သွားအများကြီးပိုထိရောက်သင်သည်သင်၏ဒေသခံမူးယစ်စတိုးဆိုင်မှာတှေ့နိုငျသောအရာကိုထက်မျ​​ားမှာ.
အကြံပြုချက်! ဖြူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, သန့်စင်အံသွား, ပုံမှန်ပါးစပ်တွင်းသန့်ရှင်းရေးဟာမဖြစ်မနေများမှာ. ကြိုတင်မဲအတွက်အချိန်များများအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုခြောက်လချိန်းနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်ဖို့သေချာပါစေ.
သင့်ရဲ့အံသွားဖို့အနည်းငယ်သွားလည်ပတ်မှုလည်းဖြူ. ဆရာ over-the-counter ဝယ်ယူမရနိုငျသော whitening အံသွားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသုံးနိုင်သည်.
သင်သည်သင်၏အံသွား Whiten မှစတော်ဘယ်ရီကိုသုံးနိုင်သည်. စတော်ဘယ်ရီ၏အော်ဂဲနစ်လုပ်တက်ကြမ်းတမ်းဓာတုပစ္စည်းမရှိဘဲသင်၏အံသွား Whiten ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. စင်ကြယ်သောစတော်ဘယ်ရီတစ်လုပ်သွားတိုက်ဆေးပါစေ, သို့မဟုတ်သင့်အံသွားပေါ်တိုက်ရိုက်လတ်ဆတ်တဲ့စတော်ဘယ်ရီပွတ်သပ်.
အကြံပြုချက်! ကုန်ကြမ်းအစားအစာများ, အထူးသဖြင့်အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကျန်းမာသန်စွမ်းသင့်ရဲ့အံသွားကိုစောင့်ရှောက်. လုပ်ငန်းများ၌နှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အစားအစာများအဝါရောင်သင့်ရဲ့အံသွားကိုဖွင့်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအခေါင်းပေါက်စေနိုင်ပါတယ်.
သံပုရာနှင့်လိမ္မော်သီးကိုသင်ပေး ဗီတာမင် C ကို, ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းသွား-whitening properties.Rub တစ်သိမ်မွေ့ whitening အကျိုးသက်ရောက်မှုအဘို့သင့်အံသွားဆန့်ကျင်ခွံ၏အတွင်းရှိ. သင်တို့သည်လည်းဤနည်းလမ်းကိုတင်ပြလိမ့်မည်ဟုမြင်နိုင်ရလဒ်များကိုတိုးတက်လာဖို့အ peels မှဆား၏နည်းနည်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်.
Whiten ထုတ်ကုန်နှင့်အတူထည့်သွင်းညွှန်ကြားချက်ကိုသုံးပါ. ထက်, ဒါကြောင့်သွားဖုံးနှင့်ခံတွင်းကိုယားယံစေနိုင်ပါတယ်, နှင့်ပင်ကြီးမားသောပါးစပ်တွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေ. အထုပ်အပေါ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအတိအကျနှင့်သာထုတ်ကုန် whitening အံသွားကိုသုံးပါ.
အကြံပြုချက်! ရိုးရိုးပေမယ့်ထိရောက်တဲ့ကသဘာဝပစ္စည်းဥစ္စာဆိုဒါဖုတ်ဖြစ်ပါတယ်. ရေနှင့်ရောနှော, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
သင့်ရဲ့အံသွားစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေသငျ့လျြောသောသွားဘက်ဆိုင်ရာသန့်ရှင်းရေးရတဲ့အခါပထမဦးဆုံးအရေးကြီးသောအရာ. တိုင်းခြောက်လသန့်စင်သင့်ရဲ့အံသွား Get နှင့်သင်၏လက်ရှိသန့်ရှင်းရေးအတှကျရုံးရှိနေစဉ်သင့်ရဲ့အနာဂတ်ရက်ချိန်း.
သင်တစ်ဦးလည်းဖြူပြုံးရှိခြင်းအဘို့ပြုနိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးအရာကိုမှန်မှန်သန့်ရှင်းသောအဘို့သင့်သွားဆရာဝန်သွားရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ပုံမှန်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနှစ်ကြိမ်, ဤစင်ကြယ်သောအချိန်စာရင်း. တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့တစ်သန့်ရှင်းရေးပြု, သငျသညျမမေ့မလြော့ပါဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အောက်ပါရက်ချိန်းကို set up. ဖုန်းကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုသတိပေးပေးရန်သင့်ရုံးကိုရယူပါ.
အကြံပြုချက်! သွားတိုက်ဆေး whitening အံသွားမယ့်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောပုံမှန်သွားတိုက်ဆေးမှမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာကွာခြားချက်အများကြီးလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းယ့်ထုတ်ကုန်အပေါ်ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးအိုင်ဒီယာမဟုတ်ဘူး.
ကျန်းမာသောအစားအစာများကိုစားပါ; အသီးအပွတူကုန်ကြမ်းအစားအစာများကိုစုံလင်သောဥပမာ. သင့်ရဲ့အံသွားကျန်းမာတဲ့အံသွားတွေဟာသေချာစေရန်အစာ၏ဤအမျိုးမျိုးမှပယ်ရှားနေပါ. ကောင်းတဲ့အပြုံးများအတွက်ရည်ရွယ်သောအခါသင်တို့သည်လည်း snacking ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်.
တစ်ဦးကောက်ရိုးတဆင့်သောက်သုံးလည်းဖြူအံသွားကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီနိုငျသောများစွာသောသေးငယ်တဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးကောက်ရိုးကိုသုံးလျှင်, ထိုအရည်ကိုသင့်အံသွားရဲ့မျက်နှာပြင်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိလာဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိသည်. အဆိုပါအရည်ကိုသင့်အံသွားကိုရှောင်ကွင်းနှင့်သင့်လည်ချောင်းကိုဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်.
အကြံပြုချက်! အဖြူအံသွားအောင်မြင်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်း, မလွဲမသွေမပါဘဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့အံသွားဖြီးနဲ့ Floss. သင်သည်ဤပြုလျှင်, ဒါကြောင့်သွားအရောင်ပြောင်းဖြစ်စေသောပြားများ၏တည်ဆောက်ဖွင့်ဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မည်.
ဒါဟာဆေးလိပ်စီးကရက်ထုတ်လုပ်စီးကရက်မီးခိုးသင်ဓါတ်ငွေ့ကိုရှူရှိုက်မိတိုင်းအချိန်ကိုသင့်အံသွား discolors ကြောင်းကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်အချက်ဖြစ်ပါသည်.
Whiten တကယ်သင့်ရဲ့သွားဆရာအားဖြင့်ပြုသောအမှုရှိခြင်းသငျသညျအကြိုးရလဒျလိုအပ်ပုံကိုလျင်မြန်စွာအပေါ်မူတည်, နှင့်မည်သို့ဆိုးဆိုးရွားရွားသင့်ရဲ့အံသွားစွန်းထင်းခဲ့ကြ. ဒီကပိုစျေးကြီးဖြစ်လိမ့်မည်သော်လည်း, သငျသညျမြန်အတူတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ, သင်သည်အခြား whitening နည်းပညာတွေကတဆင့်ရစေခြင်းငှါ, ထက်ပိုပြီးအထင်ကြီးရလဒ်များကို.
အကြံပြုချက်! အနီရောင်စပျစ်ဝိုင်ကျွမ်းကျင်သူ, မှန်မှန်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည်သူတို့သည်အထူးသဖြင့်, သွားအရောင်ပြောင်းရှိသည်ဖို့လေ့. အနီရောင်စပျစ်ရည်ကိုအရောင်သူတို့ကိုမဲမှောင်စေသည်သောအံသွားရဲ့ကြွေလွှာသို့စုပ်ယူသည်.
ပုံမှန်သွားတိုက်ဆေးနှင့် whitening အံသွားအတိတ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် similar.You သင့်ရဲ့အံသွားအတွက်အဖြူရောင်ကိုပြောင်းမယ့်ထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူးနေကြတယ်. သင်တစ်ဦးအကျိုးရှိမပေးပါဘူးကြောင်းကိုသင်၏အချိန်နှင့်ငွေကိုထုတ်ဖြုန်းပါလိမ့်မည်.
သင်ဆေးလိပ်သောက်နေလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်သင်၏အံသွား whitening မဆိုအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ရပ်တန့်ရမယ်. တစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ် Whiten လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုက်ဆံတစ်သိသိသာသာငွေပမာဏကုန်ကျ. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြုပြီးတော့စီးကရက်ကိုတက်လင်းကြလျှင်, သငျသညျကိုပယ်ကြောင်းပိုက်ဆံပစ်ချခဲ့ကြ. အဆိုပါ Whiten အလျင်အမြန်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်ပြောင်းပြန်ပါလိမ့်မည်.
အကြံပြုချက်! တိုက်မှအရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သွားဖုံးနှိပ်နယ်, အနည်းဆုံးတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် FLOSS. Brush နဲ့ Floss တိုင်းရေစာနှင့်ဘောဇဉ်အောက်ပါသင့်ရဲ့အံသွားအဖြူနေဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
ညာဘက်အစာစားပြီးနောက်သင့်ရဲ့အံသွားနိန် discoloring မှသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၏အရေးပါသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ကော်ဖီမှကြွလာတဲ့အခါဒီကျိန်းသေမှန်.
သင်သည်သင်၏အပြုံးတောက်ပစေတယ်မှအိမ်မှာကိုသုံးလိမ့်မည်ဟုတစ် whitening လိမ်းဆေးအဘို့သင့်သွားဆရာဝန်ကိုမေး. ဤနည်းလမ်းကိုသင်ရက်သတ္တပတ်အဘို့အသီးအသီးတညဉျ့လိမ်းဆေးနှင့်အတူဖြည့်ပါနှင့်အချိန်တစ်အချို့သောငွေပမာဏအဘို့သင့်အံသွားလျှောက်ထားလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးပါးစပ်ဗန်းနှင့်တကွသင်ပေးသွားဆရာဝန်ကပါဝငျ. ဒါဟာ technique ကိုရှစ်ရိပ်တောက်ပအထိသင့်ရဲ့အပြုံး Whiten နိုင်ကဆိုသည်င်.
အကြံပြုချက်! သင်လက်ရှိကိုယ်ဝန်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထုတ်ကုန် whitening သွားဆိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးမှရှောင်ကြဉ်! ထိုထုတ်ကုန်’ ပါဝင်ပစ္စည်းများသင့်ရဲ့ကြီးထွားလာကလေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်စေခြင်းငှါ. whitening သွားတိုက်ဆေးကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အများအားဖြင့်သုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေများမှာ, ဒါပေမဲ့သေချာစေပါရန်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်သွားဆရာဝန်နှင့်စစ်ဆေး.
Whiten အထူးပြုတဲ့ mouthwash သုံးပြီးကြိုးစားပါ. ဒါဟာရလဒ်များကိုရရှိရန်လအတွင်းယူနိုင်ပါသည်. ဤရွေ့ကား mouthwashes ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်လို့ခေါ်တဲ့ whitening ဓာတုဆံ့. သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူဒါဟာင်. သင်သည်သင်၏အံသွားတိုက်မီကရိုးရှင်းစွာအဝက်လောက်မိနစ်များအတွက်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်နဲ့သုတ်ခြင်း.
အကြံပြုချက်! FLOSS ကအရေးကြီးတယ်. FLOSS plaque ၏ဖယ်ရှားပစ်ရစေတယ်, သင့်ရဲ့အံသွားအရောင်ပြောင်းစေနိုငျသော.
ပန်းသီးစားတာသူတို့တကယ်ရှိပါတယ်ထက်သင့်ရဲ့အံသွားလည်းဖြူဖြစ်ခြင်း၏ထင်ယောင်ထင်မှားပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. crunchy အစားအစာများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသင်တို့၏ကြွေအပေါ်အများကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရန်မလိုဘဲသင့်ရဲ့အံသွားသန့်ရှင်းရေးကိုကူညီနိုင်သည့်ပွန်းစားခြင်းအရည်အသွေးကများ.
walnut သစ်ပင်တပင်အခေါက်နှင့်အတူသူတို့ကိုပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်သင့်အံသွားအဟောင်းလမ်း Whiten. သင့်ရဲ့အံသွားပေါ်မှာဤပွတ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သူတို့ကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်သူတို့ကိုလည်းဖြူစေသည်. အခေါက်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင့်ရဲ့ခံတွင်းကိုထုတ်သုတ်ရန်သေချာစေပါ, ပြီးတော့ဖြီး.
အကြံပြုချက်! နို့ထွက်အစားအစာများ၏ပိုကြီးပမာဏစားသုံး. နို့နှင့်တူအစားအစာများ, ဒိန်ခဲနှင့်ဒိန်ချဉ်အားလုံးသင်အားကြီးသောပေးကူညီနိုငျသောသတ္တုဓာတ်များ, သငျသညျအလိုရှိသောကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုအံသွား.
သင်သည်သင်၏အံသွား Whiten မှဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. သငျသညျရိုးရိုးဖြေရှင်းချက်သို့နှစ်ပြီးသော washcloth သို့မဟုတ်မည်သည့်ဝါဂွမ်းပစ္စည်းကိုနှစ်ဖွငျ့ဤလုပျနိုငျ. သင်ကမှေးမှိန်နေသည်ပာုင့်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့အံသွား၏ဒေသများတွင်ကျော်စိုစွတ်သောအထည်ကိုပွတ်သပ်. အဆိုပါပါအောက်ဆိုဒ်အစွန်းအထင်းပေါ့စအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်နဲ့အထည်သူတို့ကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်ကူညီပေးသည်.
ဒဏ်ငွေအမှုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါပင်လယ်အော်အရွက်များနှင့်လိမ္မော်ရောင် peels ကိုသုံးပါ. ဒီအရောအနှောနှင့်အတူဤအမှုန့်နှင့်ဖြီးဖို့ရေ Add. whitening သွားနှင့်ကိုက်ခဲများအပြင်, ဒီသွားဖုံးရောဂါနှင့်အခေါင်းပေါက်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးပါမည်.
အကြံပြုချက်! တစ်ဦး walnut သစ်ပင်တပင်မှအခေါက်တစ်ဦးအံသွား Whiten အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. အသွားမျက်နှာပြင်အနှံ့အခေါက်ပွတ်သင့်ရဲ့အံသွားကနေအစွန်းအထင်းများနှင့်အဝါရောင်ရုပ်ရှင်ရုတ်သိမ်းပေးရန်ဖို့က enable လိမ့်မည်.
သင့်ရဲ့အံသွားရဲ့အရောင်ကိုသင်နှောင့်အယှက် အကယ်., ရွေးချယ်စရာအဘို့သင့်သွားဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်. အချို့လူများက whitening အံသွားတဲ့ဖြုန်းတီးအသုံးစရိတ်သည်ထင်, Off-ရောင်စုံအံသွားရှိခြင်းသင်သည်သင်၏အသက်တာအသက်ရှင်နေထိုင်ပုံကိုထိခိုက်ဖို့စတင်သည်လျှင်သော်လည်း, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနိုင်သောကြောင့်, အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိစေခြင်းငှါ.
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ် whitening အံသွားကြိုးပမ်းခြင်းမပြုမီ, အမြဲပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့သွားဆရာနှင့်အတူတိုင်ပင်ဖို့သေချာပါစေ. တခါတရံစွန်းအံသွားပိုကောင်းတဲ့သန့်ရှင်းရေးချမှတ်အားဖြင့်ပုံသေနိုင်ပါတယ်. whitening ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြု၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. သင်၏အသွားဆရာဝန်ကိုမေး. သင့်ရဲ့သွားဆရာသင်၏နှုတ်ထုတ်ကုန်၏ဤအမျိုးအစားများကိုစတင်အသုံးပြုဖို့ရန်အခြေအနေရှိမရှိမှသကဲ့သို့သင်တို့ကိုအကြံပေးနိုင်ပါတယ်. သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်တစ်ဦးအံသွား whitening ထုတ်ကုန်ကိုသုံးလျှင်အခေါင်းပေါက်သို့မဟုတ်သွားဖုံးရောဂါကသာပိုမိုဆိုးရွားဖြစ်လာလိမ့်မည်.
အကြံပြုချက်! သငျသညျအဖြူသင့်ရဲ့အပြုံးစောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကကော်ဖီနှင့်လက်ဖက်ရည်ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုအပ်. အလွန်အကျွံပမာဏနိုင်ပါတယ်သောက်သုံး, အချိန်ပို, သိသာထင်ရှားသောအစွန်းအထင်းစေ.
သငျသညျလည်းဖြူအံသွားချင်တယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့အံသွားဖို့ Vaseline တစ်အင်္ကျီကိုလျှောက်ထား. ဒါဟာအဆင်သင့်အရသာရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်နာရီပေါင်းများစွာအဘို့သင့်အံသွားနှင့်အစွန်းအထင်းအကြားတစ်ဦးအကာအကွယ်အတားအဆီးပေးသွားမှာပါ.
သငျသညျအစာစားပြီးနောက်, သင့်ရဲ့အံသွား Whiten နှင့်သန့်ရှင်းရေးကိုကူညီအချို့သောစေးဝါး. တချို့ကဝါးသွားဖုံးအထူးသဖြင့်အံသွား Whiten မှထုတ်လုပ်လျက်ရှိ, နှင့်လည်းအဖြူသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်. ဤရွေ့ကားသွားဖုံးပတ်ဝန်းကျင်သင့်ရဲ့အံသွားစောင့်ရှောက်မည်ကြောင်းအစွန်းအထင်း-တိုက်ခိုက်နေပါဝင်ပစ္စည်းများ feature. ဝါးသွားဖုံးလည်းသင့်ရဲ့အံသွားထံမှမည်သည့်အစာအမှုန်ကိုလျှော်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုသဘာဝကတံတွေးကိုထုတ်လုပ်.
အဝါရောင်အံသွားသောက်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦး၏တစ်ဦးကိုအလွယ်တကူသိသာလက္ခဏာသက်သေဖြစ်. သင်ဆေးလိပ်သောက်လျှင်ဒါဟာအံသွားအဖြူအပြုံးစောင့်ရှောက်ဖို့မဟုတ်ဘဲခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်. သင်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ရှိသည်ဆိုပါက, သငျသညျကျိန်းသေသင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်သင့်ရဲ့အပြုံးအကြိုးဆေးလိပ်သောက်မည်မျှလျှော့ချသင့်တယ်.
သူသည်သင်တို့တစ်လိမ်းဆေးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့သွားဆရာဝန်ကိုမေးအိမ်မှာ Whiten ကိရိယာအစုံမှာအသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်. ဤနည်းလမ်းကိုအထိရှစ်ရိပ်တောက်ပခြင်းအားဖြင့်သင့်အံသွား Whiten နိုင်.
သင်သည်သင်၏အံသွားလည်းဖြူဖြစ်လိုလျှင်, သငျသညျပုံမှန်အစည်းအဝေးပါးစပ်တွင်းသန့်ရှင်းရေးချိန်းရှိသင့်. ပုံမှန်ပါးစပ်တွင်းသန့်ရှင်းရေးသငျသညျ regimen whitening သင့်ရဲ့အံသွားအတွက်ပါဝင်နိုင်ပါသည်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများတို့တွင်. သင်သည်သင်၏သွားဆရာဝန်သွားရောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကအနည်းဆုံးနှစ်ဦးကြိမ်နှစ်က.
whitening gels သင့်ရဲ့အံသွားလည်းဖြူ Whiten မှရရှိနိုင်ပါသည်. သငျသညျမူးယစ်စတိုးဆိုင်များမှာဤအ gels ယ်ယူနိုင်ပြီးသူတို့တစ်တွေသွားဆရာဝန်အားဖြင့် whitened သင့်ရဲ့အံသွားရတဲ့ထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း. သင့်ရဲ့အံသွားကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့သို့မဟုတ်အလွန်အရောင်ပြောင်းကြည့်ရင်, သငျသညျပထမဦးဆုံးသွားဆရာဝန်ကိုသွားသင့်တယ်.
Mouthwash တကယ်တော့သင့်ရဲ့အံသွား၏အရောင်ပြောင်းသင် mouthwash အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆီးတားနိုငျသောအံသွားပြီဖြစ်စေမသင့်ရဲ့သွားဆရာ discoloration.Ask မြှင့်တင်ရန်နိုင်.
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်အံသွား Whiten မှလုံခြုံလမ်းမက. ဒါဟာအန္တရာယ်မကင်းကြောင်းနှင့်အမှန်တကယ်နောက်ထပ်အရောင်ပြောင်းဖြစ်လာရန်သင့်အံသွားထွက်ခွာနိုင်. သင့်ရဲ့အံသွားလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာသောသူမဟုတ်ပါကဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ရှိပါတယ်သမျှသောထုတ်ကုန်များရှောင်ကြဉ်ပါ.
ဒါဟာမြင့်မားပါက straighter နှင့်တိုးတက်လာသောအပြုံးဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကသင်သည်သင်၏အသစ်အပြုံးမြင်သောအခါ braces.You ecstatic ဖြစ်လိမ့်မည်ဝါယာကြိုးရတဲ့မီကသင့်ရဲ့အံသွား whitened ပြီအကြံပြုသည်!
ဆရာအံသွားသလောက် Whiten နိုငျသောအထူးအလင်းအိမ်နှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရောင်ချွတ်တ္ထုများကိုသုံးနိုင်သည် 15 အလွန်လျင်မြန်စွာရိပ်. လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ဤအမျိုးအစားများသောအားဖြင့်ပတ်ပတ်လည်ငါးရာဒေါ်လာတစ် session ကိုကုန်ကျမည်.
သင့်ရဲ့အံသွားအဆက်မပြတ်မှိုင်းသို့မဟုတ်အဝါရောင်ကြည့်ရင်, သင်အကြိုက်ဆုံးအဖျော်ယမကာအပြစ်တင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစား. ဧဒုံစပျစ်ရည်နှင့်ကော်ဖီအံသွားကိုရှုတ်ချဖို့လူသိများကြသည်. ဤအဖျော်ယမကာသောက်သုံးကြသောအခါအံသွားအဆက်အသွယ်နဲ့အဆက်အသွယ်အချိန်ကန့်သတ်မယ့်ကောက်ရိုးကိုသုံးပါ.
အံသွားနိန်အဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်စတော်ဘယ်ရီသွားတိုက်ဆေး Make. စတော်ဘယ်ရီသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်တစ်ဦး whitening အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ. ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အအချို့သောငါးပိထရောထွေးစေရန်, ရေပေါင်းစပ် (1/4 ခွက်), မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ (1/2 ခွက်) mashed ခဲ့ကြကြောင်းနှင့်သုံးစတော်ဘယ်ရီ.
သင်သည်သင်၏အံသွားသင့်လျော်သောအရိပ်နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့်တစ်ဦးလည်းဖြူရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ရှိစေနိုင်သည်. သူတို့မဲမှောင်ကြည့်ဖို့လေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်တောက်ပတဲ့အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ပြောင်းအံသွားစေမည်. အရောင်တွေအံသွားဘို့အကောင်းဆုံးအရောင်များကိုပန်းရောင်သို့မဟုတ်ဝတ်လစ်စလစ်အရိပ်ဖြစ်ကြ၏.
သငျသညျချင်တဲ့အဖြူအံသွားရယူခြင်းစျေးကြီးနှင့်အတန်ငယ်တစ်လုပ်ရတဲ့၏ဖြစ်နိုင်. ဖြူအံသွားရတဲ့၏သင့်ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်အကူအညီမှမရရှိနိုင်ပါမြောက်မြားစွာနည်းလမ်းများရှိပါသည်. ဤနေရာတွင်ထွက်ထားအကြံပေးချက်များ Apply, ဒါကြောင့်သင်ဖြစ်စဉ်သွားဆရာဝန်မှာပညာရှင်ပီသစွာပြုမိလာမရှိဘဲသင်၏အံသွား Whiten နိုင်.
Whiten သွားလမ်းညွှန် Posted by ကို - ဇွန်လ 5, 2016 12 မှာ:44 နံနက်
categories: Whiten သွားသိကောင်းစရာများ Tags:: ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်အပြုံး, အပြုံးပြိုးပြိုးပြက်ပြက်, ကျန်းမာသောအံသွား, အဝါရောင်အံသွား, ဗီတာမင် C ကို